Warar - Suuqa Xaashida Xumbo PVC: Hordhac
•Xaashida xumbada PVC waxay ka kooban tahay polyvinyl chloride. Wax soo saarka batroolka, resins, iyo kiimikooyinka aan dabiici ahayn ayaa loo isticmaalaa soosaarka waraaqahan. Meel kontorool ah, dareeraha ficil-celinta ayaa loo ballaariyay si loo soo saaro go'yaal xumbo PVC ah. Tani waxay soo saartaa kala duwanaansho kala duwan oo ah cufnaanta xumbo.
•Faa'iidooyinka xaashiyada xumbo ee PVC waxaa ka mid ah iska caabbinta kuleylka, u adkaysiga daxalka, u adkaysiga dabka, fududaan karaynta iyo rinjiyeynta, iyo xoog sare iyo adkeysi
•Go'aannada xumbadaani waa kuwo khafiif ah, isku-cufan oo si adag ugu xidhan laminates iyo reins. Xaashiyadan waxaa loo isticmaalaa xirashada derbiga, soosaarida alaabada qurxinta gudaha ama banaanka, qeeybinta, looxyada bandhigga, looxyada bandhigyada, bandhigyada pop-up, keydinta, daaqadaha, saqafyada beenta ah, iyo warshadaha dhismaha.
•Go'yaal xumbo ah oo loo yaqaan 'PVC sheets' ayaa loo adeegsadaa beddel ahaan go'yaal alwaax ah si loo soo saaro albaabbada, alaabta guriga, looxyada bannaanka lagu xayeysiiyo, khaanadaha, iwm. Xaashidahan waxaa si isdaba joog ah loogu adeegsanayaa codsiyo kala duwan sababo la xiriira xoolahooda jir ahaaneed, isku mid ahaanta, iyo dhalaalka iyo dhalaalka.
Kordhinta Baahida loogu talagalay Qalabka Dhismaha ee Joogtada ah & Qiimaha Jaban si ay u Waddo Suuqa Xaashida Xumbada Caalamiga ah
•Suuqa xaashida xumbada aduunka ee loo yaqaan 'PVC sheet' waxaa wada baahida sii kordheysa ee loo qabo xaashiyadan ee codsiyada kala duwan, oo ay ku jiraan dhismaha, baabuurta, iyo baakadaha. Waxay sidoo kale bixisaa kuleyl aad u fiican & iska caabinta dabka iyo guryaha ka hortagga gaaska, taas oo ka dhigaysa wax ku habboon isticmaalka gawaarida, basaska, ama soo saarista saqafyada tareenka.
•Xaashida xumbada PVC waa ka-hortagga, caddaynta shoogga, iyo kuwa aan sunta lahayn ee bini-aadamka oo leh kahortag dabka, sigaar-cabid, iyo guryaha ilaalinta UV. Waxay sidoo kale bixiyaan xoog iyo adkaysi aad u fiican, waxayna leeyihiin waxyaabo kiimiko deggan iyo biyo dhuuq hooseeya. Sidaa darteed, go'yaal xumbo ah PVC ayaa si ballaaran loogu shaqaaleeyay dhismaha iyo qalabka dhismaha, gaadiidka, iyo badda.
•Kordhinta baahida loo qabo qalabka wax ku oolka ah ee wax dhisaya ee wadamada soo koraya waxay u badan tahay inay sare u qaado baahida loo qabo waraaqaha xumbo ee PVC. Qalabka dhismaha ee ku-saleysan xumbada PVC ayaa beddelaya qalabka kale ee caadiga ah, sida qoryaha, shubka, dhoobada, iyo birta.
•Waxyaabahani waa sahlan yihiin in la rakibo, u adkaysta cimilada, ka raqiisan, miisaan yar, waxayna bixiyaan faa'iidooyin kala duwan marka loo eego qalabka caadiga ah
•Kordhinta qawaaniinta si loo yareeyo isticmaalka tamarta ee dhismayaasha ayaa sidoo kale la saadaalinayaa inay sare u qaado baahida loo qabo waraaqaha xumbo PVC inta lagu jiro muddada saadaasha. Intaa waxaa sii dheer, kordhinta tirada dhismooyinka joogtada ah ayaa la rajeynayaa in lagu wado suuqa xumbada PVC ee Aasiya Baasifigga.
•Qiimaha alaabta ceeriin ee kacsan, hoos u dhaca dhaqaale, iyo xeerarka adag ee dowladda ayaa saameyn ku yeelan kara kobaca suuqa xumbada adduunka ee 'PVC'